မက်ဆီ ချိုးဖြတ်ဖို့ရှိနေတဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲ
ဒီရာသီမှာ မက်ဆီ Messi အတွက် စောင့်ကြိုနေတဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းများ
18 Nov 2018 . 5:25 PM
ဘာစီလိုနာ နာမည်ကျော် တိုက်စစ်မှူး မက်ဆီ Messi ရဲ့ ခြေစွမ်း၊ အောင်မြင်မှု၊ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေကို ချီးကျူးရင်တော့ ပြောစရာစကားလုံးတောင် ရှာမတွေ့နိုင်တော့ဘူး။ (၃၁)နှစ်အရွယ် ရောက်လာပြီဖြစ်ပေမယ့် မက်ဆီဟာ ဆုဖလားတွေကို ဆာလောင်နေဆဲ၊ အောင်မြင်မှု လမ်းမထက်မှာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဆက်ပြေးနေဆဲ။ မကြာသေးခင်ကပဲ ဂျာမန်ဂန္ထ၀င်ကြီး ဂတ်မူလာ Gerd Muller တင်ရှိခဲ့တဲ့ ဥရောပကစားသမားတွေထဲမှာ ကလပ်အသင်းတစ်သင်းအတွက် ဂိုးအများဆုံး သွင်းခဲ့သူ စံချိန်ကို ချိုးဖြတ်ခဲ့ပြန်တယ်။
ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် (၅၆၆)ဂိုးသွင်းထားတဲ့ မက်ဆီဟာ အခုဆိုရင် ကမ္ဘာ့စံချိန်ရှင် ဘရာဇီးလ်ဂန္ထ၀င်ကစားသမား ပီလီ Pele ကို ကျော်တက်ဖို့ မျက်စောင်းထိုးနေပြန်ပြီ။ ပီလီဟာ ဆန်းတို့စ်အသင်းအတွက် (၆၄၃)ဂိုး သွင်းထားပြီး ကလပ်အသင်းတစ်သင်းတည်းအတွက် သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်နေပေမယ့် ဒီစံချိန်ကို မက်ဆီ ကျော်ဖြတ်ဖို့က (၇၇)ဂိုးသာ လိုတော့လို့ အခုအချိန်မှာ ပီလီလည်း မျက်ခုံးလှုပ်နေလောက်ပါပြီ။ အဲဒီစံချိန်အပြင် ဒီရာသီမှာ မက်ဆီ ချိုးဖြတ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် အမီလိုက်နိုင်ဖို့ရှိနေတဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေက ဘာတွေလဲဆိုတော့ . . . .
လာလီဂါမှာ ဟက်ထရစ်အများဆုံး သွင်းယူသူ
မတ်လ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရီးယဲလ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ မက်ဆီဟာ ကစားသမားဘ၀ ပထမဆုံး ဟက်ထရစ်ကို စသွင်းခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကတည်းက မက်ဆီဟာ ဟက်ထရစ် သွင်းရတဲ့အရသာကို လျှာလည်သွားပုံပါပဲ။ သွင်းလိုက်တဲ့ ဟက်ထရစ်တွေ။ အခုဆိုရင် ဘာစီလိုနာကစားသမားဘ၀မှာ မက်ဆီရဲ့ ဟက်ထရစ်သွင်းယူခဲ့တဲ့ အကြိမ်က (၄၂)ကြိမ်အထိ ရှိနေပြီး လာလီဂါမှာ အကြိမ်(၃၀)သွင်းယူခဲ့တယ်။ လာလီဂါမှာ ဟက်ထရစ်အများဆုံး သွင်းယူထားသူက သူ့ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ဟောင်းကြီး စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ဖြစ်ပြီး (၃၄)ကြိမ်သွင်းထားတယ်။ ဒါကြောင့် မက်ဆီအနေနဲ့ ဒီရာသီမှာ ဟက်ထရစ် (၅)ကြိမ်သွင်းခဲ့ရင် စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ စံချိန်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မှာပါ။
လာလီဂါ သွင်းဂိုးအများဆုံး (ပီချီချီ)ဆုကို အကြိမ်အများဆုံးရရှိသူ
လာလီဂါသွင်းဂိုးအများဆုံး (ပီချီချီ)ဆုဆိုတာ စပိန်နာမည်ကြီး အားကစားသတင်းစာ Marca က နှစ်စဉ် ချီးမြှင့်နေတာဖြစ်ပြီး အကြိမ်အများဆုံး ရယူခဲ့သူက ဘီလ်ဘာအိုအသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူးကြီး တယ်လ်မိုဇာရာ Telmo Zarra ပါ။ သူဟာ ၁၉၄၄-၄၅ ရာသီကနေ ၁၉၅၂-၅၃ ရာသီအထိ ပီချီချီဆုကို (၆)ကြိမ်တိုင် ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ တယ်လ်မိုဇာရာရဲ့နောက်မှာ ဒီစတီဖာနို Alfredo Di Stefano ၊ ကွီနီ Quini ၊ ဟူဂိုဆန်းချက်ဇ် Hugo Sanchez နဲ့ မက်ဆီ တို့က (၅)ကြိမ်စီနဲ့ ရပ်တည်နေပြီး မက်ဆီကလွဲရင် ကျန်တဲ့သူတွေက ဘောလုံးလောကမှာ မရှိတော့ပါဘူး။ မက်ဆီသာ ဒီရာသီမှာ ဂိုးသွင်းအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ရင် တယ်လ်မိုဇာရာရဲ့ စံချိန်ကို အမီလိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စပိန်ဘုရင့်ဖလား ဗိုလ်လုပွဲမှာ အကြိမ်အများဆုံး ဂိုးသွင်းသူ
အခုလောလောဆယ် မက်ဆီဟာ စပိန်ဘုရင့်ဖလား ဗိုလ်လုပွဲ (၅)ပွဲအထိ ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး တယ်လ်မိုဇာရာနဲ့ အကြိမ်အရေအတွက် အတူတူဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီရာသီမှာ ဘာစီလိုနာအသင်း စပိန်ဘုရင့်ဖလား ဗိုလ်လုပွဲတက်နိုင်မယ်၊ မက်ဆီလည်း ဂိုးသွင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် စပိန်ဘုရင့်ဖလားဗိုလ်လုပွဲမှာ အကြိမ်အများဆုံးး ဂိုးသွင်းသူအဖြစ် စံချိန်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကလပ်အသင်းတစ်သင်းအတွက် ချန်ပီယံလိဂ် သွင်းဂိုးအများဆုံး
ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ကလပ်အသင်းတစ်သင်းတည်းအတွက် သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားအဖြစ် စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီတို့ (၁၀၅)ဂိုးစီနဲ့ ပူးတွဲရပ်တည်နေတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ရီးယဲလ်အသင်းအတွက် သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး မက်ဆီက စပါးအသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုဒုတိယပွဲမှာ ဂိုးသွင်းယူခဲ့လို့ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ သွင်းဂိုးအရေအတွက် တူညီသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒဏ်ရာကြောင့် အင်တာမီလန်နဲ့(၂)ပွဲစလုံးကို လွဲချော်ခဲ့လို့သာ စံချိန်သစ် မတင်နိုင်သေးတာပါ။ နိုဝင်ဘာလ (၂၉)ရက်မှာ PSV နဲ့ အဝေးကွင်း ကစားမယ့်ပွဲကျရင် မက်ဆီ ဂိုးသွင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ စံချိန်သစ်တင်နိုင်ပါပြီ။
လာလီဂါမှာ သွင်းဂိုး(၄၀၀)ပြည့်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမား
မက်ဆီဟာ လာလီဂါမှာ လုံးဝပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ ကစားသမားဖြစ်သွားပါပြီ။ သူ့ကို အနီးကပ်ဆုံး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မယ့် စီရော်နယ်လ်ဒိုကလည်း လာလီဂါမှာ မရှိတော့ပါဘူး။ မက်ဆီအနေနဲ့ လာလီဂါမှာ (၃၉၂)ဂိုးအထိ သွင်းထားပြီး သမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားအဖြစ်လည်း ရပ်တည်နေတယ်။ လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာ ဂိုးတွေဆက်သွင်းပြီး ဂိုး(၄၀၀)ပြည့်ခဲ့ရင်တော့ သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ လာလီဂါသွင်းဂိုး (၄၀၀)သွင်းယူခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ . . မက်ဆီအတွက် စံချိန်မှတ်တမ်းသစ်တွေကတော့ ရှေ့မှာ အသင့်စောင့်နေပါပြီ။ ဒီထဲက ဘယ်စံချိန်ကို ချိုးဖြတ်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား . .
Photo:Business Insider,Barca Blaugranes,Twitter,Goal,The Independent
ဒီရာသီမှာ မကျဆီ Messi အတှကျ စောငျ့ကွိုနတေဲ့ စံခြိနျမှတျတမျးမြား
ဘာစီလိုနာ နာမညျကြျော တိုကျစဈမှူး မကျဆီ Messi ရဲ့ ခွစှေမျး၊ အောငျမွငျမှု၊ စံခြိနျမှတျတမျးတှကေို ခြီးကြူးရငျတော့ ပွောစရာစကားလုံးတောငျ ရှာမတှနေို့ငျတော့ဘူး။ (၃၁)နှဈအရှယျ ရောကျလာပွီဖွဈပမေယျ့ မကျဆီဟာ ဆုဖလားတှကေို ဆာလောငျနဆေဲ၊ အောငျမွငျမှု လမျးမထကျမှာ အရှိနျအဟုနျနဲ့ ဆကျပွေးနဆေဲ။ မကွာသေးခငျကပဲ ဂြာမနျဂန်ထဝငျကွီး ဂတျမူလာ Gerd Muller တငျရှိခဲ့တဲ့ ဥရောပကစားသမားတှထေဲမှာ ကလပျအသငျးတဈသငျးအတှကျ ဂိုးအမြားဆုံး သှငျးခဲ့သူ စံခြိနျကို ခြိုးဖွတျခဲ့ပွနျတယျ။
ဘာစီလိုနာအသငျးအတှကျ (၅၆၆)ဂိုးသှငျးထားတဲ့ မကျဆီဟာ အခုဆိုရငျ ကမ်ဘာ့စံခြိနျရှငျ ဘရာဇီးလျဂန်ထဝငျကစားသမား ပီလီ Pele ကို ကြျောတကျဖို့ မကျြစောငျးထိုးနပွေနျပွီ။ ပီလီဟာ ဆနျးတို့ဈအသငျးအတှကျ (၆၄၃)ဂိုး သှငျးထားပွီး ကလပျအသငျးတဈသငျးတညျးအတှကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး ကစားသမားအဖွဈ ရပျတညျနပေမေယျ့ ဒီစံခြိနျကို မကျဆီ ကြျောဖွတျဖို့က (၇၇)ဂိုးသာ လိုတော့လို့ အခုအခြိနျမှာ ပီလီလညျး မကျြခုံးလှုပျနလေောကျပါပွီ။ အဲဒီစံခြိနျအပွငျ ဒီရာသီမှာ မကျဆီ ခြိုးဖွတျဖို့ ဒါမှမဟုတျ အမီလိုကျနိုငျဖို့ရှိနတေဲ့ စံခြိနျမှတျတမျးတှလေညျး ရှိနပေါသေးတယျ။ အဲဒါတှကေ ဘာတှလေဲဆိုတော့ . . . .
လာလီဂါမှာ ဟကျထရဈအမြားဆုံး သှငျးယူသူ
မတျလ ၁၉ ရကျ၊ ၂၀၀၇ ခုနှဈ ရီးယဲလျနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ မကျဆီဟာ ကစားသမားဘ၀ ပထမဆုံး ဟကျထရဈကို စသှငျးခဲ့တယျ။ အဲဒီအခြိနျကတညျးက မကျဆီဟာ ဟကျထရဈ သှငျးရတဲ့အရသာကို လြှာလညျသှားပုံပါပဲ။ သှငျးလိုကျတဲ့ ဟကျထရဈတှေ။ အခုဆိုရငျ ဘာစီလိုနာကစားသမားဘဝမှာ မကျဆီရဲ့ ဟကျထရဈသှငျးယူခဲ့တဲ့ အကွိမျက (၄၂)ကွိမျအထိ ရှိနပွေီး လာလီဂါမှာ အကွိမျ(၃၀)သှငျးယူခဲ့တယျ။ လာလီဂါမှာ ဟကျထရဈအမြားဆုံး သှငျးယူထားသူက သူ့ရဲ့ ပွိုငျဘကျဟောငျးကွီး စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ဖွဈပွီး (၃၄)ကွိမျသှငျးထားတယျ။ ဒါကွောငျ့ မကျဆီအနနေဲ့ ဒီရာသီမှာ ဟကျထရဈ (၅)ကွိမျသှငျးခဲ့ရငျ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ စံခြိနျကို ကြျောဖွတျနိုငျမှာပါ။
လာလီဂါ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး (ပီခြီခြီ)ဆုကို အကွိမျအမြားဆုံးရရှိသူ
လာလီဂါသှငျးဂိုးအမြားဆုံး (ပီခြီခြီ)ဆုဆိုတာ စပိနျနာမညျကွီး အားကစားသတငျးစာ Marca က နှဈစဉျ ခြီးမွှငျ့နတောဖွဈပွီး အကွိမျအမြားဆုံး ရယူခဲ့သူက ဘီလျဘာအိုအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူးကွီး တယျလျမိုဇာရာ Telmo Zarra ပါ။ သူဟာ ၁၉၄၄-၄၅ ရာသီကနေ ၁၉၅၂-၅၃ ရာသီအထိ ပီခြီခြီဆုကို (၆)ကွိမျတိုငျ ရယူနိုငျခဲ့တယျ။ တယျလျမိုဇာရာရဲ့နောကျမှာ ဒီစတီဖာနို Alfredo Di Stefano ၊ ကှီနီ Quini ၊ ဟူဂိုဆနျးခကျြဇျ Hugo Sanchez နဲ့ မကျဆီ တို့က (၅)ကွိမျစီနဲ့ ရပျတညျနပွေီး မကျဆီကလှဲရငျ ကနျြတဲ့သူတှကေ ဘောလုံးလောကမှာ မရှိတော့ပါဘူး။ မကျဆီသာ ဒီရာသီမှာ ဂိုးသှငျးအမြားဆုံးဖွဈခဲ့ရငျ တယျလျမိုဇာရာရဲ့ စံခြိနျကို အမီလိုကျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
စပိနျဘုရငျ့ဖလား ဗိုလျလုပှဲမှာ အကွိမျအမြားဆုံး ဂိုးသှငျးသူ
အခုလောလောဆယျ မကျဆီဟာ စပိနျဘုရငျ့ဖလား ဗိုလျလုပှဲ (၅)ပှဲအထိ ဂိုးသှငျးခဲ့ပွီး တယျလျမိုဇာရာနဲ့ အကွိမျအရအေတှကျ အတူတူဖွဈနပေါတယျ။ တကယျလို့ ဒီရာသီမှာ ဘာစီလိုနာအသငျး စပိနျဘုရငျ့ဖလား ဗိုလျလုပှဲတကျနိုငျမယျ၊ မကျဆီလညျး ဂိုးသှငျးနိုငျမယျဆိုရငျ စပိနျဘုရငျ့ဖလားဗိုလျလုပှဲမှာ အကွိမျအမြားဆုံးး ဂိုးသှငျးသူအဖွဈ စံခြိနျတငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ကလပျအသငျးတဈသငျးအတှကျ ခနျြပီယံလိဂျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး
ခနျြပီယံလိဂျမှာ ကလပျအသငျးတဈသငျးတညျးအတှကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး ကစားသမားအဖွဈ စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ မကျဆီတို့ (၁၀၅)ဂိုးစီနဲ့ ပူးတှဲရပျတညျနတေယျ။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ရီးယဲလျအသငျးအတှကျ သှငျးယူခဲ့တာဖွဈပွီး မကျဆီက စပါးအသငျးနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျအုပျစုဒုတိယပှဲမှာ ဂိုးသှငျးယူခဲ့လို့ စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ သှငျးဂိုးအရအေတှကျ တူညီသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒဏျရာကွောငျ့ အငျတာမီလနျနဲ့(၂)ပှဲစလုံးကို လှဲခြျောခဲ့လို့သာ စံခြိနျသဈ မတငျနိုငျသေးတာပါ။ နိုဝငျဘာလ (၂၉)ရကျမှာ PSV နဲ့ အဝေးကှငျး ကစားမယျ့ပှဲကရြငျ မကျဆီ ဂိုးသှငျးနိုငျမယျဆိုရငျတော့ စံခြိနျသဈတငျနိုငျပါပွီ။
လာလီဂါမှာ သှငျးဂိုး(၄၀၀)ပွညျ့ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမား
မကျဆီဟာ လာလီဂါမှာ လုံးဝပွိုငျဘကျကငျးတဲ့ ကစားသမားဖွဈသှားပါပွီ။ သူ့ကို အနီးကပျဆုံး ယှဉျပွိုငျနိုငျမယျ့ စီရျောနယျလျဒိုကလညျး လာလီဂါမှာ မရှိတော့ပါဘူး။ မကျဆီအနနေဲ့ လာလီဂါမှာ (၃၉၂)ဂိုးအထိ သှငျးထားပွီး သမိုငျးတဈလြှောကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး ကစားသမားအဖွဈလညျး ရပျတညျနတေယျ။ လာမယျ့ပှဲစဉျတှမှော ဂိုးတှဆေကျသှငျးပွီး ဂိုး(၄၀၀)ပွညျ့ခဲ့ရငျတော့ သမိုငျးတဈလြှောကျလုံးမှာ လာလီဂါသှငျးဂိုး (၄၀၀)သှငျးယူခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျပွီဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရေ . . မကျဆီအတှကျ စံခြိနျမှတျတမျးသဈတှကေတော့ ရှမှေ့ာ အသငျ့စောငျ့နပေါပွီ။ ဒီထဲက ဘယျစံခြိနျကို ခြိုးဖွတျမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျလား . .